Fisarahana matetika amin'ny hoditra madio amin'ny Adobe Photoshop | Famoronana an-tserasera
Ny tontolon'ny famolavolana sary mahatakatra teknika tsy misy farany ary ireo teknika ireo dia hamela ny mpamorona na ny hobbyista famolavolana hanova ny tetikasan'izy ireo, hamaly ny fangatahan'ny mpanjifany na angamba hanome fahafaham-po ny mason'izy ireo manokana rehefa manao maodely. Araka izany, ireo teknika izay hain'ny mpampiasa hamela anao hiresaka toe-javatra maromaro ao anatiny no hahafahany mandrefy ny fahafaha-manao azy ao anatin'io sehatry ny fahalalana io, izany hoe ny fahaiza-manao izay hainy hanome azy fotoana mihoatra ny mpampiasa hafa, manitatra Sehatra asa ary mamela anao hampivelatra izay nianaranao nandritra ilay fanazaran-tena io.
Ity lahatsoratra ity dia hampahafantatra anao ny iray amin'ireo teknika ampiasaina amin'ny rindrambaiko Adobe Photoshop atao hoe Fisarahana matetika, ampiasaina hanadiovana ny hoditr'olombelona amin'ny sary hanovana. Ity teknika ity dia mety heverina ho sarotra sy mankaleo hanatanteraka, na izany aza, ao amin'ny lahatsoratra dia hanolotra torolàlana vitsivitsy hodinihina izahay, amin'ny fomba ahafahan'ny mpampiasa manao azy kisary momba ny fampiasana an'io teknika io, miaraka amin'ny fanantenana fa hamerina handinika ny fahasarotan'ity teknika ity izy.
Fisarahana matetika miaraka amin'ny Photoshop
Voalohany, ilaina ny mametra karazana sosona roa, ny sosona endrika ary ny loko misy ny sary.
Ny hevitra momba ny fisarahana matetika dia misy afaka miasa miaraka amin'ireo sosona tsirairay ireo, amin'ny fomba tsy misy akony amin'ny iray hafa ny fanovana ny iray. Noho izany, ny fisarahana matetika dia mamela ny mpampiasa ovao ny sosona sary, amin'ny fomba iray izay ahafahan'ny sary hadio raha ny momba ny hoditry ny olona eo amin'ny sary.
Noho izany, ary hanatanterahana ny fisarahana ny refesina, dia tsy maintsy atao izany mamorona sosona roaSamy, amin'ny ampahany amin'ny andiany tokana, amin'ny fomba izay ny fanovana natao latsaka amin'ny sosona voalohany ny sary. Avy amin'ireo sosona misaraka ireo, azontsika atao ny mamaritra raha efa vita tsara ilay sosona sary tany am-boalohanyNoho izany, tsy maintsy mazava amintsika ny mety hisian'ny sosona roa ao anaty sary iray ho toy ny antony hamaritana, ary angamba ny sary sasany dia tsy manana ny loko miloko tsara indrindra na, raha tsy izany dia misy sosona firafitra. Saingy, ity farany dia tsy voatery hametra ary ny sary ambany kalitao, izay misy ireo sosona ireo ihany koa, dia azo ovaina tsy misy olana lehibe, raha jerena mazava ho azy fa ny valiny dia tsy ho ny optimum indrindra.
Mba hanatanterahana ny fisarahana matetika dia tsy maintsy manaraka ireo dingana aseho eto ambany isika:
Amin'ny fitsipika dia tsy maintsy amboary amin'ny sary toy ny Adobe Camera RAW ny sary, ny modely hampivelarana ny Lightroom kokoa, raha tsy izany, misy programa tsara indrindra ho an'ny fisie.
Amin'izay mba, tsy maintsy averina in-2 ny sosona voalohany miaraka amin'ny baiko (Ctrl + J), mamorona sosona 3 ao amin'ny tontonana. Ny ambony dia mety ho endrika iray, fa ny faharoa kosa mety ho ny loko iray, ary ny farany avelany ho ny sosona voalohany.
Manaraka an'io dia tsy maintsy ampandehano ny sosona COLOR, miaraka amin'izay dia esorinay ny fomba fijerin'ny sosona TEXTURE. Mandeha amin'ny Filter> Blur> Gaussian Blur izahay. Ho an'ity sosona voalohany ity, manandrana mitazona ny lokony izahay ary ny sivana izay vao nahetsika dia hanazava ny sary iray manontolo. Avy eo, atsanganatsika ny tariby amin'ny teboka izay tsy misy antsipiriany intsony ireo endrika, na dia tsy maintsy tadidintsika aza izany io angamba no teboka marefo indrindra. Tokony hatsangantsika kely ilay radius alohan'ny hitovizan'ny endrika tanteraka. Hatao ihany koa izany, arakaraka ny kalitao sy ny hamafin'ny sary.
Izahay izao dia mitady ny sosona firafitra mba tazomy fotsiny ny antsipiriany. Izahay dia mitady ny sivana High Pass, izay manasongadina ireo firafitra, saingy mety tsy mandeha izy io satria ny sosona vaovao noforoninay dia AZA mamokatra ny sosona voalohany vokatr'izany. Tokony hanao izany isika amin'izay apetaho ny sary, safidy ahafahantsika manambatra ny fantsona, miaraka amin'ireo sosona sary miaraka aminy. Amin'io lafiny io, ny hevitra dia ny manamboatra azy io mba hitrandrahana ny antsipiriany rehetra tadiavintsika. Ho an'ity:
Mandeha amin'ny sary> mampihatra sary ary manova toy izao izahay, miankina amin'ny fiarahanay miasa amin'ny sary 16 na 8-bit.
Avy eo manova ny fomba fanaparitahana ny lamba firakotra ho mazava Linear. Ho an'ny tanjona azo ampiharina dia safidintsika ireo sosona roa (Ctrl + Click) ary mankany amin'ny Layer> New> Group avy amin'ny sosona, izany no fisarahana sy matetika.
Raha vantany vao vita io dia hitantsika fa ny tarika sosona dia mitovy tanteraka amin'ny sary tany am-boalohany, dia satria nahavita azy io tamim-pahombiazana isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Fisarahana matetika hanadiovana ny hoditra amin'ny Adobe Photoshop
Lara maldi dia hoy izy:
izao no ataoko
Valiny tamin'i Lara Maldi
Juan | mamorona sary masina an-tserasera dia hoy izy:
Mampahery tokoa ny mahita fa afaka mijanona ny sary misy famirapiratana somary tsy mifandanja amin'ny endrik'ilay zazavavy aorian'ny asa fanitsiana, toy ny sary matihanina voadio. Ankehitriny dia betsaka ny rindranasa azo sintomina sy ampiasaina amin'ny finday finday.
Mamaly an'i Juan | mamorona sary masina an-tserasera
Mart Uka dia hoy izy:
Elisa Aboy jereo… ..
Valiny tamin'i Mart Uka